Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia mitarika amin'ny varotra fizahantany FITUR manerantany
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Edmund Bartlett dia vonona hanatrika ny fivarotana fizahan-tany sy fizahan-tany iraisam-pirenena andrasana fatratra, FITUR, izay hotontosaina manokana any Madrid, Espana, manomboka ny 19-23 Mey.
FITUR no toerana fihaonana maneran-tany ho an'ireo matihanina amin'ny fizahantany sy ny foiben'ny varotra ho an'ny tsena miditra sy ivelany any Amerika Latina sy Karaiba.
Faly i Jamaica fa iray amin'ireo toera-misy fizahan-tany voasolotena amin'ity hetsika fanao isan-taona andrasana fatratra ity.
Ny Minisiteran'ny fizahantany dia hiara-miasa sy hanana fiarovana vaovao.
FITUR no foibe varotra lehibe manerantany natao farany talohan'ny areti-mandringana COVID-19, ary izy no voalohany miverina amin'ny endrika tsy virtoaly.
“Faly i Jamaika fa iray amin'ireo toeran-kaleha fizahan-tany ao amin'ny iray amin'ireo hetsika fanao isan-taona andrasana indrindra. Manantena aho fa hiteraka tombony amin'ny fampiasam-bola marobe ho an'i Jamaika, izay tsy isalasalana fa hisy fiantraikany amin'ny fomba fiovantsika amin'ny vokadratsin'ity areti-mandringana ity, "hoy ny minisitra Bartlett.
Raha any Madrid, ny minisitra dia hanatrika fihaonambe maromaro amin'ireo mety ho mpampiasa vola, ary koa ireo mpandray anjara amin'ny indostria lehibe, toa an'i Gabriel Escarrer, CEO an'ny Melia Hotels International ary Carmen Sampol, CEO an'ny SAMPOL, orinasa injeniera malaza.
“FITUR no fihaonana maneran-tany ho an'ireo matihanina amin'ny fizahantany ary ny foiben'ny varotra ho an'ny tsena miditra sy ivelany any Amerika Latina sy Karaiba. Ny fiatrehana ity taona ity dia ho zava-dehibe amin'ny famerenana sy fikojakojana ireo tambajotra sy orinasa ho an'ny fitsangatsanganana indray ny fizahantany ", hoy i Bartlett.